Njengoba wazi, ukudla okunempilo kwengane kuyisibopho sengqondo enhle nempilo. Ukuthi ingane iyasebenza, ijabule futhi ijabule kubalulekile ukubuka ukuthi ingane idla. Imenyu ehlelwe kahle eyocatshangelwayo izonikeza ingane amandla anjalo okwenzelwe ukuhlakanipha, ukuthuthukiswa ngokomzimba nokuvumelanisa nokukhula. Ukudla okunomsoco enkulisa kubhekene nokukhathazeka kwanoma yimuphi umama osinike ingane enkulisa futhi okhathalela impilo yengane.
Imenyu yezingane inqunywa imigomo yokudla kwezingane. Kuqala ukubheka ukuzondeka nokuzidla, kodwa empeleni, ihlolwe, ithuthukiswe futhi ivunyiwe yi-Ministry of Health ye-Russian Federation. Njengomthetho, imenyu ye-enkulisa yenzelwa isonto, umntwana uthola yonke imishini edingekayo, amavithamini, amakholori avela ekudleni. Ukudla kwansuku zonke kucatshangwa ngemininingwane encane kakhulu, emini, imikhiqizo efanayo ayiphindaphindiwe. Kanye ngosuku, imikhiqizo enjengemikhiqizo yobisi omuncu, amaqanda, inyama, i-pasta, okusanhlamvu, imifino ingaba khona emenyu ye-kindergarten, kodwa izinhlanzi zinikezwa kanye ngesonto.
Izingane ezinkulisa zaseRussia zidla izikhathi ezine - kwasekuseni nasekuseni, itiye ntambama kanye nesidlo sakusihlwa. Imikhiqizo inezitifiketi zekhwalithi futhi idlulisa ukuhlolwa okuqinile, nokupheka kuhlangabezana nezidingo zemigomo yokuhlanzeka. Ngokuvamile, lokhu kulandelwa umhlengikazi.
Ingane enkulisa ichitha lonke usuku futhi abazali badlala indima ebalulekile ekuhleleni imenyu efanele. Ngeke kube okungenakuqapha ukuqapha ukudla komntwana wakho enkulisa bese ulungisa ukudla ekhaya kancane, ukuze ukwazi ukugcwalisa ezinye izikhala. Kuyadingeka ukuthi nsuku zonke imenyu ihluke, gwema ukuphinda ukuphinda imikhiqizo ngosuku olufanayo. Uma kwakukhona isidlo sakusihlwa ensimini, khona-ke ungenza izikhwama ekhaya, uma unikeza i-omelet enkulisa, khona-ke lo mkhiqizo kufanele ukhishwe ekhaya. Lokhu kuzokusiza ukugwema kokubili ukungabi nokuningi kwezidakamizwa ezithile.
Futhi ekugcineni, iseluleko kubazali abanikeza ingane enkulisa. Ngaphandle kwezikhathi ezinjengendlela yokufundisa ingane ebhodweni, mfundise ukuba agqoke, adle i-spoon, ugeze, udinga ukufundisa ingane yakho ukuba idle izitsha ezinjalo ezingavamile ezinganeni ezisenkulisa. Futhi kudingeka uzame ukuthola ama-fritters, isobho, i-jelly ne-casserole ukuze ube izitsha ezijwayele futhi ezijwayele ingane yakho. Ukuze ukondle ingane ngokugcwele futhi ngokuphumelelayo, umuntu kufanele agcine umbuso wokudla enkulisa.
Indlela yokufundisa ingane ukuba idle imifino?
Ukondla komuntu ohlengikazi wezinkinga zomzimba emntwaneni
Ushukela ekudleni kwezingane
Ingabe ubisi lwezinkomo buwusizo kakhulu ezinganeni?
Uhlobo lwezingxube zezingane kanye nemithetho yokuzikhethela
Idayisi yezithelo okuthosiwe ku-batter
Fettuccini ne-cayenne sauce
Indlela yokusiza ingane isinde enhlekeleleni yeminyaka emithathu
I-Sauce kusuka ku-ketchup kanye nemayonnaise
Ukuphuma ezindaweni eziyinkimbinkimbi: sifunda ukubopha isiketi sogu lolwandle esiqongelelwe abesifazane abagcwele
Indlela yokufunda indlela yokuzijabulisa?
Izigcawu ezithokozisayo e-prom enkulisa nasezikoleni (amakilasi angu-11, 9 no-4)
Othandana naye u-Vladimir Presnyakova utshele ngothando oluyimfihlo noFedor Bondarchuk
Amazwi amahle okubonga kubazali emshadweni kanye neqembu lokuqeqesha
Imikhiqizo ewusizo wombono
Indlela abesifazane abahlobisa ngayo ukuphila kwabantu
Indoda incane kakhulu - ingabe ikusasa?
Umhlangano we "owayekade": I-Moscow premiere yefilimu "I-Duelist", isithombe
Isitshalo seqanda esibhakabhakeni